Ithonya lokudla okuqukethwe kwe-cholesterol egazini
Ukukhangisa kusinxusa ukuthi siphuze izithako ezisebenzayo ezinciphisa izinga le-cholesterol egazini, njengoba ama-cholesterol plaques aholela ekugodleni kwemithambo yegazi. Kodwa ingabe kubi, le cholesterol? Umzimba ngokusemthethweni awukwazi ukusebenza ngaphandle kwe-cholesterol. Kudingekile ukwakheka kwe-membrane yeseli ngesikhathi sokuhlukaniswa kweseli. Ngaphezu kwalokho, izinga le-cholesterol lithinta ukusinda kwabo.
Uma enganele, iseli libhujiswa. I-cholesterol yenza imisebenzi ebalulekile: iqhaza ekuhlanganisweni kwe-vitamin D, ikhuthaza ukukhiqizwa kwama-hormone e-steroid, ukwakhiwa kwamaseli. Iningi lalo likhiqizwa esibindi futhi lingena emzimbeni ngokudla. Le nqubo ibukeka kanje: ngokusebenzisa indlela yokugaya, i-cholesterol ingena esibindi, ifakwe kwigobolondo yamaprotheni anelululwe ngamanzi, ama-capsules ayingqayizivele (lipoproteins) akhiwa-athathwa ngokusakazwa kwegazi ezithombeni zabathengi. Ithonya lokudla okuqukethwe kwe-cholesterol egazini - isihloko sesihloko.
Lokhu ukuvikelwa kwemvelo kweseli kusuka emiphumeleni ye-oxygen radicals kuyo, ehamba ngokuhamba kwamahhala. I-cholesterol nayo iyadingeka ukuze kuhlanganiswe u-vitamin D, okudingekayo ekwakheni ama-hormone e-cortex adrenal kanye nama-hormone ocansi abesifazane nabesilisa. Ama-lipoprotein ngokwawo angamabandla aphakeme futhi aphansi. Ubukhulu obuphansi - i-LDL - kubhekwa "kubi", njengoba bephethe i-cholesterol ezindongeni zezimpahla, lapho kuqoqwa khona, okwandisa ingozi ye-atherosclerosis.
Kumele kucatshangelwe ukuthi ukunciphisa ngokweqile ku-LDL, kanye nokwanda kwe-HDL, kuyingozi emzimbeni. Uma une-cholesterol engama-6 mmol / l, kufanele ucabange ngokudla kwakho, ikakhulukazi uma kunezinye izici ezingozini zokugula kwesifo senhliziyo. Kunoma yikuphi, kufanele uthintane nochwepheshe. 7 mmol / l - akufanele ukwesaba, kodwa kufanelekile ukucabanga ngendlela yakho yokuphila. Ukwandisa umsebenzi wokuzivocavoca, thintana nomuntu onomsoco mayelana nokudla kwabo, futhi ngemva kwezinyanga ezingu-2-4 ukuhlola imiphumela. 8-10 mmol / l inani le-cholesterol - akukho isenzo esizimele! Ngokuhlolwa okunjalo, ukubonisana nodokotela kuyadingeka. UKUBALULEKILE ukuhlolwa kwegazi lwe-biochemical for lipids kunikezwa izinkomba ezinjalo njenge-cholesterol ephelele (cholesterol), i-cholesterol ye-cholesterol ye-cholesterol (i-high-density lipoprotein cholesterol), i-LDL cholesterol (i-low-density lipoprotein cholesterol). Izinkomba zokutadisha isifo senqubo yesifo senhliziyo; ukukhuluphala; izifo zesibindi, izinso kanye ne-pancreas; endocrine pathologies. I-sampling yegazi ibonakala ekuseni, isisu esingenalutho, kungakapheli amahora ayisishiyagalolunye emva kwesidlo sokugcina, indaba yocwaningo yi-serum yegazi. Landela ukulandelana kokuthola ama-juice kungakhethwa, omunye angashintshwa omunye. Into eyinhloko ukuphuza ama-juice asanda kufakwa (esitolo angabi ngaphezu kwamahora amabili esiqandisini) bese uwaxhaphaza ngokushesha ngaphambi kokuthatha.
Kuyaziwa ukuthi isifo senhliziyo esisodwa sithatha abesifazane eminyakeni eyishumi kamuva kunamadoda: lokhu kungenxa yesenzo se-estrogen, esinezibalo eziphezulu ezikhiqizwa ngaphambi kokuya esikhathini. Ngesikhathi esifanayo, abesifazane abanesisindo esiningi, isifo sikashukela kufanele bahlolwe njalo kungakhathaliseki ubudala. Ngaphezu kwalokho, ngoba isifo esisemzimbeni sithinta ngokuphelele zonke izigaba zokuphila, kungashiwo ngokuqiniseka ukuthi izinga le-libido lixhomeke ku-cholesterol - lisanda kuqinisekiswa ososayensi base-Italy. Baphetha ngokuthi izinga eliphezulu le-cholesterol kubantu besifazane, linciphisa ubulili babo. Nokho, emadodeni, ukwanda kwe-cholesterol egazini kuholela ekusebenziseni ngokocansi. Lokhu kungenxa yokuthi igazi elimbozwe ngama-cholesterol plaques libi kakhulu kunokuthi "ukuxosha" igazi, futhi ukutholakala okwanele kwezitho zobulili ezine-oksijeni nezondlo kungaholela ekulahlekelweni kwesifiso socansi. Ngakho-ke, nganoma yikuphi ukuphazamiseka kwesifiso socansi, odokotela bayelulekwa ukuba bahlole igazi nge-cholesterol, baqhubeke nokudla futhi bangene emidlalweni.
Uma wazi ukuthi kungenzeka ukwanda kwe-cholesterol, thintana nodokotela: uzobeka izidakamizwa ezinciphisa i-cholesterol nokudla okuhambisanayo. Futhi okwesithathu kubo abasoli ngisho nokusola ukuthi bane-cholesterol ephezulu (hyperlipidemia). I-Hyperlipidemia iyinhlangano ephakeme ngokungavamile ye-cholesterol yabantu noma i-lipoproteins. Ukwephulwa kwe-cholesterol noma i-lipoprotein imetabolism kwenzeka kaningi, futhi lokhu kuyisici esibalulekile sengozini yokutholakala kwezifo zenhliziyo ngenxa yethonya elibalulekile le-cholesterol ekuthuthukiseni isifo sokuqina kwesifo somzimba. Ngaphezu kwalokho, ezinye ze-hyperlipidemia zithinta ukuthuthukiswa kwe-pancreatitis ejulile. Noma kunjalo, kukhona futhi ikhambi labantu. Thatha imbewu ye-sesame, uyiqede esimweni sefulawa. Thatha ufulawa phezu kwezipuni kathathu ngosuku - ekuseni, ngesidlo sakusihlwa futhi kusihlwa, ungakwazi ukudla. Futhi ngalesi sikhathi kuzuzisa ukunakekelwa okwanele ngokomzimba, ukulawula ukucindezelwa nokukhipha ukubhema nokuphuza utshwala. Ngendlela, labo abayeka ukubhema ngokushesha bathuthukisa ukuhlolwa kwabo izikhathi eziningana. Ngonyaka, abantu abayizigidi ezingu-17.5 bafa ngenxa yezifo zenhliziyo, eziningi zazo ezibangelwa ukwephulwa kwe-lipid metabolism. Ngakho-ke, namuhla, enikezwe uhlobo lokusabalalisa kwezifo zenhliziyo, kunengqondo ukukhuluma ngesifo sengculazi.
Izithasiselo eziningana eziphilayo ezikhona eziphilayo zinezindawo zokuphulukisa ezingeni eliphezulu le-cholesterol "embi". Nokho, ngaphambi kokuthatha noma yisiphi isinyathelo, qiniseka ukuthi uxhumana nodokotela wakho. I-Nicotine (i-nicotinic acid, i-vitamin B3) i-vithamini ehlanganyela ekusebenzeni okuningi kwe-cell cell. Ihluke ngokuthi ijwayele ukugxila kwegazi lipoprotein; ngokulinganisa okukhulu (3-4 g / ngosuku) kunciphisa izinga lokuhlushwa kwe-cholesterol, i-LDL, kwandisa izinga le-HDL nge-anti-atherogenic effect (kuvimbela izinguquko ezishintshayo ezindongeni ze-arteries), linciphisa izitsha ezincane, kufaka phakathi ubuchopho, kuthuthukise inkumbulo nokuxhumanisa ukunyakaza. Okuqukethwe ngesinkwa se-rye, ama-legumes, izinso nesibindi. Ikhiqizwe ngesimo semithi, umthamo ophakanyisiwe we-500 mg izikhathi ezintathu ngosuku. I-Policosanol (i-sugar beet extract) iyanciphisa ukusatshalaliswa kwe-cholesterol, iyanciphisa i-LDL cishe ngo-30% futhi ikhulise i-HDL ngo-15%. Isilinganiso esinconywe: 10-20 mg ngosuku. I-asicorbic acid (i-vitamin C) yikhambi levithamini elinomthelela wokungcolisa umzimba futhi lingena emzimbeni kuphela ngokudla. Kuyaziwa ukuthi i-vitamin C iqhaza ekulawulweni kwezinqubo zokunciphisa i-oxidation, i-blood coagulability, ukuvuselelwa kwezicubu, ukunciphisa ukuqina kwe-vascular, kunciphisa isidingo samavithamini B, B2, A, E, folic acid. Kwatholakala nokuthi i-vitamin C iphakamisa amazinga e-HDL e-cholesterol evikela abantu asebekhulile. Ngaphezu kwalokho, ukungezwa kokudla okucebile ku-pectin ascorbic acid kuholela ekwehleni kwe-cholesterol ephansi kune-pectin yokudla okulula (ne-citrus, utamatisi, isitshalobhisi, isipinashi ziqukethe kokubili). I-Vitamin E (i-tocopherol) iyinvithamini enamafutha angenayo, i-antioxidant ebalulekile.
■ ukunciphisa inqubo yokuguga;
Oxygenation yamaseli; ukuqinisa izindonga zemithambo yegazi;
■ ukuvimbela ukwakheka kwezindwangu zegazi, ngaphezu kwalokho - ukubhuka kwabo;
■ ukuqinisa i-myocardium. Ehambisana nemifino nebhotela, imifino, ubisi, amaqanda, isibindi, inyama, kanye nokudla okusanhlamvu.
Kuvela ukuthi i-calcium njengokwesekwa kokudla akusizi nje ukuqinisa amathambo, kodwa futhi iyasiza inhliziyo. Phakathi naleso sifundo kwaziwa ukuthi ukusetshenziswa kwe-1 g ye-calcium ngosuku ngezinyanga ezingu-2 kunciphisa izinga le-cholesterol ngo-5% kubantu abane HDL. Ukumnika of plantain. Izinto eziphilayo ezisebenzayo zamaqabunga e-plantain, phakathi kwabanye, ziyi-saponins, i-pectin, i-flavonoids ne-oxycinnamic acid, ezisiza ukunciphisa i-cholesterol e-plasma yegazi futhi ibe nomphumela we-hypocholesterolemic.
1 tbsp. aluhlaza okwesibhakabhaka uthele 1 indebe yamanzi abilayo, gcizelela imizuzu engu-15. bese uhlunga. Thatha i-tbsp engu-1 ngayinye. Izikhathi ezintathu ngosuku ngaphambi kokudla. Ukukhishwa kwe-artichoke kwandisa ukukhiqizwa kwama-coenzymes ngama-hepatocyte futhi kuthinta umzimba we-lipids, imizimba ye-cholesterol ne-ketone, kuthuthukisa umsebenzi we-antitoxic wesibindi. Ukukhishwa kuyatholakala njengesengezo sezinto eziphilayo ezisebenzayo. AmaSoybe. Mhlawumbe kuphela impahla enhle yama-soybean, okuyiyona ososayensi abaphikelela ngayo, ikhono lokunciphisa izinga leLDL. Ukuze wenze lokhu, kufanele ufike kuma-25 amagremu amaprotheni ngosukula - cishe amagremu ama-250 we-tofu ushizi. Kusobala ukuthi ukudla imikhiqizo eminingi ye-soy kunoma ubani kunzima, ngakho-ke ungenza amaprotheni kuphela we-soy e-powder uphinde uyichithe (ngokulingana nesipuni esisodwa sokulinganisa) emanzini noma ubisi oluphansi. Inketho engcono kakhulu ukwengeza i-soy powder kuze kube iphalishi.
Ukukhishwa okumhlophe nokusobala kusuka esifubeni: kubangela, izimpawu, ukuxilongwa
Indlela yokulahlekelwa isisindo futhi ungadayili futhi
Ungakuyeka kanjani ukuguga namuhla?
Isikhanda esifundeni sendawo
Izakhiwo zokuphulukisa kolwandle usawoti
Iyini i-PMS yesifazane?
Unganciphisa kanjani ukudla ngokusiza kwamakhambi abantu?
Zokupheka zokunethezeka ngesidlo sesithumba sasendle
Itiye lemon leqhwa (Ice Tea)
Izambatho ezinhle zamadoda
Ukuqhathaniswa kwabesifazane kumadoda amancane kunabo
Izinyathelo zokunakekela izinwele ezincane kakhulu
Ukufaneleka komama nengane
Ingoma ethinta inhliziyo kumama kunyembezi evela endodaneni yakhe nendodana yakhe. "Umama yiyona engcono kunazo zonke emhlabeni" nezinye izingoma zezingane nezomdala mayelana nomama onamazwi nomculo
Amaski wezinwele ezilimazayo nezingonakalisiwe
Okudingayo ukwazi ngomntwana ezinyangeni ezingu-7
Steam curd vareniki nge strawberries
Ukufunda ukubhala incwadi yokuthumelela indoda
Isaladi ye-squid nemifino
Izindwangu ze-Fashion, Winter 2015-2016, isithombe
U-Anastasia Volochkova washintsha ngokuphelele isitayela, isithombe